Ny Alaska Airlines sy ny Horizon Air dia mitaky saron-tava ho an'ny mpiasa sy ny flyer
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » USA Travel News » Ny Alaska Airlines sy ny Horizon Air dia mitaky saron-tava ho an'ny mpiasa sy ny flyer
Mba hifanarahana amin'ny tolo-kevitry ny Centers for Disease Control (CDC) sy hitandrina ny mpiasa sy ny vahiny ho voaro, ny saron-tarehy dia tsy maintsy atao ho an'ny vahiny manomboka amin'ny 11 Mey sy ho an'ny Alaska Airlines ary ireo mpiasa ao amin'ny Horizon Air izay tsy afaka mitazona ny halaviran'ny fiaraha-monina enina metatra miala ny vahiny na ny mpiara-miasa, manomboka amin'ny 4 Mey. Anisan'izany ny mpanamory fiaramanidina, mpanamory sidina ary mpiasan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa.
"Ny fiarovana no lanjany lehibe indrindra amin'ny Alaska Airlines, ary misaotra ireo mpiasanay fa manana fandidiana azo antoka izahay. Raha jerena ny Covid-19, ao anatin'ny vanim-potoana vaovao amin'ny dia an-habakabaka isika ary manavao hatrany ny fari-piarovana anay mba hiarovana tsara kokoa ny vahininay sy ny mpiasa. Amin'izao fotoana izao dia tafiditra ao anatin'izany ny fanaovana sarontava, izay fiarovana hafa izay mety hampihena ny fihanaky ny viriosy ", hoy i Max Tidwell, filoha lefitry ny fiarovana ny Alaska Airlines.
Ny vahiny dia antenaina hitondra sarontava azy ireo ary takiana izy ireo hitafy izany manerana ny seranam-piara-manidina sy ny sidina. Ho azo omena kojakoja fanampiny ireo izay manadino saron-tarehy. Ny antsipiriany manokana momba ny takiana saron-tarehy dia hozaraina amin'ny vahiny amin'ny herinandro ambony sy amin'ny fifandraisana mialoha ny dia alohan'ny datin'ny dia. Ny politika vonjimaika dia haverina dinihina matetika rehefa mivoatra ny fitarihana.
Ny fepetra takiana amin'ny saron-tarehy dia vitsivitsy amin'ireo fepetra fiarovana sy fandavana lavitra ara-tsosialy ataon'ny Alaska Airlines eny amin'ny seranam-piaramanidina sy eny amin'ny habakabaka hanohanana ireo mpiasa sy vahininay.
Ny fepetra hafa dia misy:
Fanitarana fanatsarana ny sidina, izay misy ny fampiasana desinfectants voasoratra anarana avo lenta ho an'ny EPA, mba hanadiovana ireo toerana be mpitsikera toy ny latabatra, fehikibo, fantsona ambony, sandry ary lavarangana.
Fampiasana tsifotra fanadiovana elektrostatika hanaparitahana ny atin'ny fiaramanidina.
Ferana ny isan'ny mpandeha an-tsambo sy ny fanakanana seza afovoany amin'ny fiaramanidina lehibe sy ny fipetrahana eo amin'ny fiaramanidina kely hatramin'ny 31 Mey 2020.
Fanadiovana mihombo sy matetika kokoa ny kaontera, efitrano fatoriana ary faritra be fivezivezena matetika.
Navoaka tamin'ny seranam-piaramanidina ny fitsipiky ny gorodona nanasaraka ny fiaraha-monina tamin'ity herinandro ity hampatsiahivana ny vahiny sy ny mpiasa mba hisaraka hatrany amin'ny enina metatra farafahakeliny.
Manome sarontava lamba fandidiana sy azo ampiasaina indray ho an'ny mpiasa.
Fampiasana sivana an-habakabaka hatrany amin'ny hopitaly amin'ny fiaramanidina rehetra. Ireo sivana HEPA ireo dia voaporofo fa mahomby amin'ny fanesorana ireo sombintsombin'ny rivotra sy ny rivotra vaovao ao anaty tranony isaky ny telo minitra.
“Ny areti-mandringana COVID-19 dia nanova ny zava-drehetra, ary ao anatin'izany ny fomba fandehanay. Ny fiarovana no laharam-pahamehantsika ary ny fanaovana sarontava dia hahatonga ny fitsangatsanganan'ny rivotra ho azo antoka kokoa ho an'ny rehetra. Miara-miasa amin'izany isika rehetra, "hoy i Jeffrey Peterson, filohan'ny Alaska Executive Master Executive Council, Association of Flight Attendants.